X11SSH-TF ilay motherboard mpizara voalohany nampiasa CoreBoot | Avy amin'ny Linux
X11SSH-TF ilay motherboard mpizara voalohany mampiasa CoreBoot
Andro vitsy lasa izay ny Navoaka ireo mpamorona 9lemen amin'ny alàlan'ny fandefasana amin'ny bilaoginao, ny vaovao momba ny fitaterana ny kaody CoreBoot mankany amin'ny motherboard mpizara Supermicro X11SSH-TF.
Ny fanovana dia efa tafiditra ao amin'ny kaody kaody fototry ny CoreBoot ary hampidirina ao amin'ny famoahana lehibe manaraka. Supermicro X11SSH-TF no lozisialy mpizara voalohany mifototra amin'ny tsimbadika farany Intel Xeon izay ampiasaina miaraka amin'ny CoreBoot.
Ny antony nahatonga ny seranan-tsambo CoreBoot natao tamin'ny solaitrabe, araka ny tenin'ireo mpamolavola:
Ny fivoaran'ny firmware loharano mihidy no fari-pahaizana momba ny indostrian'ny elektronika hatramin'ny nanombohany.
Tsy niova izany na dia niainga tany amin'ny faritra hafa aza ny loharano misokatra. Ankehitriny, miaraka amin'ireo tranga fampiasana tsy miovaova sy ireo fepetra takiana amin'ny fiarovana henjana dia zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny fampiroboroboana ny lozisialy open source ho amin'ny ambaratonga manaraka.
Amin'ny motherboard dia azontsika atao ny manonona ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka azy ireo:
LGA1151, mifanaraka amin'ny processeur Intel Xeon E3-1200 v5; Manohana ny processeur Intel Core i3 / Pentium / Celeron amin'ny taranaka faha-6; Manohana hatramin'ny 80W TDP
Memory: 4x DDR4-2133 / 1866/1600 288-pin DIMM slots, ECC, unbuffered, 64GB maximum capacit
Slots: slot 1x PCI-Express 3.0 x8, slot 1x PCI-Express 3.0 x4 (mihazakazaka amin'ny x2)
SATA: seranana 8x SATA3, tohano ny RAID 0, 1, 5, 10
Antony mahatonga: MicroATX, 9.6 x 9.6 santimetatra / 24.4 x 24.4 cm
1 Momba ny CoreBoot
2 Momba ny fitaterana ny CoreBoot mankany X11SSH-TF
Momba ny CoreBoot
Ho an'ireo izay mbola tsy mahalala ny CoreBoot, tokony ho fantatrao izany ity dia loharanom-baovao misokatra ho an'ny nentim-paharazana Basic I / O System (BIOS) izay efa tao amin'ny PC MS-DOS 80s ary soloina UEFI (Unified Extensible).
CoreBoot Izy io koa dia analogy mikirakira fananana maimaimpoana ary azo anaovana fanamarinana sy fanaraha-maso feno. CoreBoot dia ampiasaina ho firmware fototra ho an'ny fanombohana fitaovana sy ny fandrindrana ny boot.
Ao anatin'izany ny fanombohana ny chip sary, PCIe, SATA, USB, RS232. Mandritra izany fotoana izany, ny singa binary FSP 2.0 (Intel Firmware Support Package) sy ny firmware firmware ho an'ny subsystem an'ny Intel ME, izay takiana mba hanombohana sy hanombohana ny CPU sy chipset, dia tafiditra ao amin'ny CoreBoot.
Marina fa mbola tsy dia malaza loatra ny CoreBoot, saingy zava-dehibe ny manamarika fa ity tetikasa ity dia nahasarika ny sain'ny maro ary na dia ny NSA aza, hatramin'ny faran'ny volana Jona tamin'ity taona ity.
Ity masoivohon'ny fiarovana ity dia nanendry mpamorona sasany hanohana ny tetikasa (na dia tsy dia hitan'ny maro loatra aza io hetsika io).
Na dia apetrakao ity ampahany ity aza dia afaka mamantatra kely momba ny maha-zava-dehibe ny tetikasa manomboka mahazo azy isika.
Momba ny fitaterana ny CoreBoot mankany X11SSH-TF
Ny asa nitranga niaraka tamin'ny mpamatsy VPN Mullvad ao anatin'ny tetikasan'ny mangarahara ao amin'ny rafitra, miaraka amin'ny tanjona hanatsara ny fiarovana ny fotodrafitrasa mpizara sy ny fanesorana ireo singa manana ny fananany izay tsy voafehy ny satan'izy ireo.
Hanombohana ny rafitra fiasa natolotry ny mpandrindra ny fampiasana SeaBios na linuxboot (Ny rindranasa UEFI Tianocore dia tsy tohanana noho ny tsy fitoviana amin'ny zana-tsary Aspeed NGI, miasa amin'ny maody an-tsoratra ihany).
Ary koa manampy ny fanohanan'ny birao amin'ny CoreBoot, ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa ihany koa fampiharana ny fanohanana ny TPM (Module Platform azo itokisana) 1.2 / 2.0 miorina amin'ny Intel ME ary nanomana mpamily ho an'ny ASPEED 2400 SuperI / O Controller, izay manao ny asan'ny BMC (Baseboard Management Controller).
Mba hifehezana lavitra ny tabilao, ny interface IPMI nomen'ny BMC AST2400 Controller dia omena, fa ny fampiasana IPMI, ny firmware voalohany dia tsy maintsy apetraka amin'ny Controller BMC.
Ankoatry ny fampiharana voamarina dia nampiharina ihany koa ary ny fampiasana superiotool dia nanampy fanampiana AST2400 sy inteltool ny tohana Intel Xeon E3-1200.
Finalmente Nolazain'izy ireo ihany koa fa ny Intel SGX (Software Guard Extensions) dia tsy mbola tohanana noho ny olan'ny fitoniana.
Tsy misy isalasalana fa dingana iray io ny fampiharana CoreBoot Nanohy nanohy ny diako aho, satria mpandraharaha maro no hisarika ny sain'izy ireo ary hanaraka ny dian'ireo mpanamboatra 9elements.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » X11SSH-TF ilay motherboard mpizara voalohany mampiasa CoreBoot
Nanafika ny tambajotra Tor ny mpikaroka mba hampihenana ny zava-bitany